Amathiphu ayi-10 abalulekile kubathengisi be-Novice | Martech Zone
NgoLwesibili, Januwari 17, 2017 NgoLwesihlanu, Okthoba 2, 2020 ULexie Lu
Ngakho-ke usukulungele ukusika amazinyo akho emhlabeni osheshayo, othokozisayo wokumaketha. Ukuzikhuthaza kubaluleke ngokungangabazeki, kepha futhi udinga ukwamukela izeluleko ezivivinywe isikhathi futhi uqonde ukuthi ungazisebenzisa kanjani kwimisebenzi yakho nasendaweni osebenza kuyo. Qhubeka ufundela izikhombisi eziyisishiyagalolunye ezibalulekile ezizokusiza ukuthi uthole, ukhule futhi uchume ngenkathi usembonini yezentengiso.
Yiba Nochuku - Zama njalo ukubheka izimo, ubuchwepheshe, kanye namathrendi ngenhloso yokuthola ongakuthola kubo ongakusebenzisa emsebenzini wakho wokumaketha. Uma une-mindset efanele, ingxoxo engajwayelekile nomngani wakho omkhulu ingaqala imibono emisha yokuthi ungalukhuphula kanjani uhambo lwencwadi lwamakhasimende akho lwakamuva.
Cabanga Ngaphandle kwebhokisi - Njengomthengisi we-novice, awunabo ubukhulu phakathi kontanga yakho. Ngenxa yalelo qiniso, abanye oxhumana nabo nezinsizakusebenza ezingatholakalela abantu abanolwazi oluningi kuzovinjelwa kuwe kuleli qophelo lomsebenzi wakho. Noma kunjalo, asikho isizathu sokudikibala. Zikhuthaze ukuthi ucabange ngaphandle kwebhokisi, ngaphezu kwamaqhinga namasu ajwayelekile. Ubuhlakani bakho bungakhokhela amaklayenti futhi banconywe ngontanga. Ukungena kumkhuba wokucabanga ngezindlela eziphikisana nokulindelwe, qhubeka uzibuze, “Ingabe kukhona engikulahlekile?"Noma"Ngingakwenza lokhu ngenye indlela?
Inethiwekhi NjengePro - Njengoba umusha embonini yezokumaketha, mhlawumbe uzizwa okungenani unqunyelwe ukuntuleka kwesipiliyoni, okuhambisana nokwazi ukuthi abantu abakajwayelani nawe okwamanje. Noma kunjalo, usengakhombisa abanye ukuthi usukulungele ukudlula kubo ukufunda ukuba yinethiwekhi enhle kakhulu.
Noma kunini lapho usengqungqutheleni, uxoxa nozakwenu ngesikhathi sokudla kwasemini noma uhleli esitimeleni ngesikhathi sokuhamba kwakho, hlala ukulungele ukukhuluma ngomsebenzi wakho. Cabanga noma ngubani ohlangana naye ongaba umlingani ongathatha umsebenzi wakho aye kwelinye izinga. Gcina amakhadi ebhizinisi esandleni bese ubhala okungenani "inkulumo eyodwa" ongayisebenzisa uma othile ebuza, "Manje, wenzani?" Lwela ukuba nokuziphatha kwakho okuhle ngaso sonke isikhathi, futhi.
Okuvelayo okwenzayo kungadala ukuthi abantu bendawo yakho babe nentshisekelo yokwazi kangcono futhi benze okusemandleni abo ukuqhubekisela phambili umsebenzi wakho, kepha futhi kungaba nomphumela ohlukile.
Lawula Imilayezo Yakho - Ukuncenga akulula njengoba kungahle kubonakale, ngoba kunezinto ongeke ukwazi ukuzilawula. Ungaphatha ezinye izingxenye zemilayezo oyithumelayo usebenzisa amagama ahehayo, izindaba ezixoxekayo, nezibonelo ezihlekisayo, kepha ubuchopho babantu futhi buthatha imininingwane abayizwayo bese bayixhumanisa nokuhlangenwe nakho okwedlule abedlule kukho. Awukwazi ukulawula leso sici, kepha ungaba namandla wokuthi umyalezo ubonwa kanjani.
Enye indlela yokwenza lokho ngukusebenzisa isibuko, inqubo lapho isikhulumi silingisa khona ukukhuluma komzimba okubonwe kumlaleli. Ukwenza isibuko kusiza ukwakha ubudlelwano futhi kwenze abantu bazizwe bekhululeke ngokwengeziwe lapho kukhona, okuholela ekutheni babe nomqondo ovulekile ngalokhu okushoyo. Ngokwezinye izifundo, ukwanda kokuthengisa kusuka kumaphesenti ayi-12.5 kuya kwangama-66 lapho kusetshenziswa amasu okwenza izibuko.
Zijwayeze Amamethrikhi Wokumaketha - Kunezindlela ezithile ezilula zokutshela ukuthi amaqhinga akho wokumaketha ayasebenza njengoba kuhlosiwe. Mhlawumbe elinye lamakhasimende akho yisilomo somculo sangaphambili esibuyele emuva embonini yezokuzijabulisa ngemuva kweminyaka eyishumi ye-hiatus. Ithi ubonile ukuthi isikhundla sakhe seBillboard sisheshisa masonto onke ngemuva kokukhangisa okugcwele ekhasini labomagazini abakhulu bese uqala umkhankaso we-Youtube ozinikele. Kunethuba elihle lokuthi izinto ozenzile ukukhangisa ukukhishwa zikhuthaze ukusebenza kweshadi elithuthukisiwe.
Noma kunjalo, kwezinye izimo, uzodinga ncika kumamethrikhi angabonakali kangako ukuthola ukuthi ngabe okwenzayo kuyasiza, noma uma izinguquko zidingeka. Imininingwane emayelana nokuvakashelwa amawebhusayithi, ukuba khona kwamakhonsathi, intshisekelo kumculi kuzo zonke iziteshi zemidiya yokuxhumana kanye nokulandwa kweringithoni konke kungasho izinganekwane zendlela yokuthengisa efanelekile.
Bheka Intuthuko Yezimboni - Usuvele ufunde ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba nomqondo wokubuza futhi ubone ukuthi cishe noma ikuphi ukuxhumana kungahle kuvuse imibono emihle ngomsebenzi wakho wokumaketha. Ngokufanayo, sebenza kanzima ukuze uhlale phezu kwentuthuko yezimboni. Amajenali wezohwebo, amawebhusayithi, namabhulogi anikeza ukuqonda okuhle kakhulu okungakusiza ufunde ngezindlela ezintsha ezisebenzayo ngaphambi kokuba zivame. Bhalisela le ncwadi kaMartech futhi ulalele Douglas Karrka- Martech Zone Izingxoxo Podcast! Ngeke ukwazi ukuqonda yonke i-athikili, kepha ngokuhamba kwesikhathi uzokwandisa ulwazi lwakho ngokucacile.
Thatha ugqozi Kubantu Abathandekayo - Njengoba usebenza ngendlela yakho emkhakheni wezokumaketha, hlala uthobekile futhi uziveze njalo kuzizinda zabantu obathandayo. Labo bantu kungenzeka ukuthi abekho nakwezomkhakha wezokumaketha, kepha basengakufundisa izimiso ezilusizo ekufezeni izinhloso zakho. Uma abantu abakukhuthazayo bedumile, cabanga ngokulanda ama-podcast, funda ama-autobiographies, noma ubuke izingxoxo ze-Youtube ukuthola imininingwane eminingi yokuthi izingqondo zabo zisebenza kanjani.
Hlola i-Marketing Automation Technologies - Ngokusho kwabanye abahlaziyi bemboni, ulwazi lokumaketha ezishintshayo i ikhono lokufuna okungakusiza ukuthi uqhubeke phambili ngenkathi uhamba ezweni eliguqukayo. Ngaphandle kokuba nolwazi ngesihloko esanda kakhulu, ungaqala ukusebenza kahle ngemisebenzi yansuku zonke. Ukuzenzekelayo kokumaketha kukwenza kube lula ukusabalalisa igama, ukukhiqiza ukuhola, nokuxhumana namakhasimende, ngaphandle kokuchitha isikhathi ngokudilizwa.
Khombisa Ukubekezela - Ngokushesha kwakho ukwenza inqubekela phambili futhi uthole imiphumela yohlu lweklayenti lakho, ungahle uphelelwe yisineke, ikakhulukazi uma kubonakala sengathi amasu amasha asetshenzisiwe awasebenzi. Njengoba kunzima kwesinye isikhathi, yiba nesimo sengqondo sokuphikelela. Akunakwenzeka ukuthi ubone izinzuzo ezinkulu ngobusuku obubodwa. Ukubekezela kubalulekile, ikakhulukazi ngaphambi kokubheka imininingwane ukuze ubone ukuthi izinsolo zakho ziyiqiniso yini.
Joyina Imiphakathi Yezokumaketha - Ukumaketha kwanamuhla kuncike kakhulu kubuchwepheshe ukusebenzisa ngempumelelo nokukala amasu ngezinsizakusebenza ezinqunyelwe. Amathuluzi akhona ukusiza futhi ungafunda ithoni ubuza nje imibuzo yochwepheshe emphakathini wethu. Qiniseka ukuthi ujoyina imiphakathi yezentengiso kuyo yonke imithombo yezokuxhumana - ikakhulukazi leyo ekhuluma ngokukhangisa embonini yakho. Ngeke uyiqonde yonke ingxoxo - kepha uzothatha amathiphu amahle azokusiza ukuthi wandise ulwazi lwakho ngokuhamba kwesikhathi.
Uyemukelwa, Umaka Omusha!
Sethemba ukuthi lawa macebiso ayishumi akusiza uzizwe uqiniseka ngokwengeziwe njengomakethi omusha. Khumbula, noma ngabe usuguqukile usuka kongcweti wezokumaketha usiya kuchwepheshe oqinisekisekayo, kuhlale kunokuningi okufanele ukufunde.
Tags: ukuba umakethi kanjaniumkhakhafunda ukumakethamarketingumkhakha wezokumakethamartechInethiwekhiukuxhumanaabathengisi abashaabasafufusa bezimaketheimfundamakhwela
U-Lexie Lu ungumklami we-UX ozimele kanye ne-blogger. Uhambisana nezindlela zakamuva ze-web ne-UX design futhi uhlala enenkomishi eduze. Ubhala athi I-Design Roast futhi ingalandelwa ku-Twitter @nonhlanhla_Nox.
Izindawo ezi-3 Zokuguqulwa Kwamapulatifomu Wokufunwa Kwamacala Ngo-2017